လာမဲ့ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ အဖြေတွေကိုဖုန်းကနေမဲပေးဖို့-mVoter 2017 v3.0.2 Apk - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > App > လာမဲ့ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ အဖြေတွေကိုဖုန်းကနေမဲပေးဖို့-mVoter 2017 v3.0.2 Apk
လာမဲ့ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ အဖြေတွေကိုဖုန်းကနေမဲပေးဖို့-mVoter 2017 v3.0.2 Apk
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:42 AM Andriod App, Android application, App
လာမဲ့ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သမျှအကုန်ကို all-in-one တစ်နေရာတည်းမှာသိနိုင်ဖို့ mVoter ကိုသုံးလိုက်ပါ။ မဲပေးစို့ Hack Challenge မှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ app ဖြစ်တဲ့ mVoter ကို ရိုးရှင်းပြီး သုံးရလွယ်အောင် ပြုလုပ်ထားလို့ မည်သူမဆို အလွယ်တကူသုံးနိုင်မှာပါ။ mVoter ကိုသေချာဖန်းတီးထားလို့ ဖုန်းအနိမ့်တွေမှာလည်း သုံးရအဆင်ပြေနေမှာပါ။ mVoter ကိုသုံးခြင်းဖြင့်
- သင်မဲပေးရမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို တိတိကျကျ သိနိုင်မယ်
- ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပါတီတွေရဲ့အချက်အလက်တွေ
- ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့ ပါတီတွေကို ရှာလို့ရမယ်
- ဘယ်လိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာ တစ်ဆင့်ချင်း အချက်ကျကျ ရှင်းပြထားတယ်
- ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမေးများတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေထားတယ်
- ပယ်မဲ၊ ခိုင်လုံမဲ ဥပမာတွေကို ကြည့်နိုင်မယ်
- ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဘာကြောင့် ပြုလုပ်ရလဲဆိုတာကို နေရာအလိုက် အတိအတကျ ပြထားတယ်
- သင်မြို့နယ်အတွင်းက မဲရုံလိပ်စာကိုကြည့်နိုင်မယ်
- ကိုးကားလို့ရအောင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အချက်အလက်တွေကိုလည်း ထည့်ထားပေးပါတယ်
လာမဲ့ ၂၀၁၇ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျပွီး သိသငျ့သမြှအကုနျကို all-in-one တဈနရောတညျးမှာသိနိုငျဖို့ mVoter ကိုသုံးလိုကျပါ။ မဲပေးစို့ Hack Challenge မှာ အနိုငျရခဲ့တဲ့ app ဖွဈတဲ့ mVoter ကို ရိုးရှငျးပွီး သုံးရလှယျအောငျ ပွုလုပျထားလို့ မညျသူမဆို အလှယျတကူသုံးနိုငျမှာပါ။ mVoter ကိုသခြောဖနျးတီးထားလို့ ဖုနျးအနိမျ့တှမှောလညျး သုံးရအဆငျပွနေမှောပါ။ mVoter ကိုသုံးခွငျးဖွငျ့
- သငျမဲပေးရမယျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို တိတိကကြ သိနိုငျမယျ
- ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ပါတီတှရေဲ့အခကျြအလကျတှေ
- ပါဝငျယှဉျပွိုငျမဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးနဲ့ ပါတီတှကေို ရှာလို့ရမယျ
- ဘယျလိုမဲပေးရမယျဆိုတာ တဈဆငျ့ခငျြး အခကျြကကြ ရှငျးပွထားတယျ
- ၂၀၁၇ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ နဲ့ပတျသကျတဲ့ အမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးတှကေို ဖွထေားတယျ
- ပယျမဲ၊ ခိုငျလုံမဲ ဥပမာတှကေို ကွညျ့နိုငျမယျ
- ၂၀၁၇ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ ဘာကွောငျ့ ပွုလုပျရလဲဆိုတာကို နရောအလိုကျ အတိအတကြ ပွထားတယျ
- သငျမွို့နယျအတှငျးက မဲရုံလိပျစာကိုကွညျ့နိုငျမယျ
- ကိုးကားလို့ရအောငျ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတုနျးက အခကျြအလကျတှကေိုလညျး ထညျ့ထားပေးပါတယျ
Learn everything about Upcoming 2017 Myanmar By-Election in All-In-One App, mVoter 2017. The winning app of the MaePaySoh Hack Challenge, mVoter 2017, is your one-stop information provider for the by-election, featuringasimple and minimalistic experience for everyone. mVoter is crafted carefully to provide support for low-end devices as well as to shine at high-ends. With mVoter 2017, Voters can
- View the Candidates in your region with the most precise location adapted with user
- View the Participating parties
- Search for participating candidates and parties
- Step-by-step detailed guide on how to vote
- Learn the process of By-Election with Frequently Asked Questions
- Learn about the valid/invalid ballots
- Learn why the by-election held with accurate informations
- Check polling station addresses within your area
- Reference 2015 Election Data.
လာမဲ့ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ အဖြေတွေကိုဖုန်းကနေမဲပေးဖို့-mVoter 2017 v3.0.2 Apk Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:42 AM Rating:5[Zawgyi] လာမဲ့ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သမျှအကုန်ကို all-in-one တစ်နေရာတည်းမှာသိနိုင်ဖို့ mVoter ကိုသုံးလိုက်ပါ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:42 AM